'Qaylada' si rasmi ah ayaa loo dhammaystiray, Agaasimuhu wuxuu la wadaagayaa Sawirka "#ForWes"
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Qaylada' si rasmi ah ayaa loo dhammaystiray, Agaasime ayaa sawir la wadaagaya "#ForWes"
'Qaylada' si rasmi ah ayaa loo dhammaystiray, Agaasime ayaa sawir la wadaagaya "#ForWes"
siidaynay ugu dambeyntii waa la dhammeeyaa Ka dib qabasho badan ka dib waqtiyadii dhammaadka COVID, ugu dambayntii waan nimid. Filimka waa la dhameeyay oo agaasime Matt Bettinelli ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuuna la wadaagay muuqaal aad u qabow si loo xuso maalinta aadka u qaaliga ah.
DHAQANKA (2022) waa dhameystiran yahay! Aad baan ugu faraxsanahay dhammaantiin inaad dhowaan aragtaan. #WaaWaa
Bettinelli ayaa la soo dhigay. Shakhsiyan, weli waxaan ahay caadifad ku saabsan Wes Craven ee marayay iyo isaga oo aan u dhow yahay galo this ee siidaynay taaso.
Weligeyba waxaan ahaa qof u maleynaya inay tahay dhamaadka koox markii mid ka mid ah xubnaha kooxda ka tago ama dhinto. Tusaale ahaan, waxaad leedahay kooxo qaar sida Duuliyeyaasha Macbadka Stone iyo AC / DC kaas oo lagu waday magac isku mid ah kadib markii ay dhaafeen fanaaniinta Scott Weiland iyo Bon Scott. Waqti ayey kuqaadeen raadinta aakhirkiina qof kale ayeey ku sifeen booska heesayaashooda hogaamiyaha ah. Kadibna waxaan leenahay xarigyo la sameeyo ka dib marka xubin dhinto. Dhamaaday Waxaan ula jeedaa, Beastie Wiilasha xitaa ma sameyn doono samee iyadoon xubintooda luntay. Marka, waa wax yar oo aniga taabasho ah. Waana hubaa inaanan keli ahayn.
Waxaas oo dhan ayaa yidhi, siidaynay taageerayaashu aad ayey ugu faraxsan yihiin soo gelitaanka soo socda. Runtii way caawinaysaa in kooxdu Wes ku hayso qalbiyadooda inta ay ka shaqeynayeen filimka. Laakiin, dhammaantiis, waxaan u maleynayaa in taageerayaasha Qaylada ay kaliya diyaar u yihiin inbadan siidaynay sugitaan dheer kadib.
Runtii waxay ka caawineysaa in agaasimayaasha, Bettinelli iyo Tyler Gilett ay si dhab ah u cabsi badan yihiin, qabow yihiin, is-hoosaysiinayaan. Hadday tahay mid keli ah oo ka shaqeynaysa Wes Craven's Scream foundation waa Bettinelli iyo Gillett. Daroogooyinkaani waxay leeyihiin safaf aad u qurux badan oo filim ah. Labada Ready ama Not iyo Southbound labaduba waa tusaalooyin ifaya oo shaki weyn iyo argagax leh geesna wada leh.
Sidoo kale waa wax weyn in la arko xiddigo soo laabanaya David Arquette, Courtney Cox iyo dabcan Neve Campbell oo markale dib u soo laabtay. Mid kasta oo ka mid ah oo dhammaantood arkay qoraalka, oo ay u maleeyeen inay tahay wax caqli badan oo hal abuur leh u sharfay Wes Craven iyo shaqadiisa.
"Agaasimayaashu waa kuwo cajiib ah, gabi ahaanba way sameynayaan… waa shirkad cusub. Waa sinta, waa cabsi. Waa uun Cabaad cusub. Maaha dib u bilaabid, mana ahan dib uhabayn, kaliya waa nooc cusub oo cusub. Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto wax cajiib ah, ”Cox ayaa tiri intii ay jirtay Showgii Drew Barrymore.
siidaynay wuxuu ku sii jeedaa tiyaatarada Janaayo 14, 2022.
Diyaar ma u tahay Wes Crevenless, Qaylo? Miyaad u malaynaysaa inay tahay waqtigii? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Qoyska Addams 2 waxay dib u soo celiyaan qoyskii waxayna ku qaataan fasax qorraxda. Halkan ka daawo muuqaalka.
Courtney CoxDavid ArguetteDrew BarrymoreGhostfaceMatt BettinellisiidaynayCabso 2022farmaajo gillett
Guillermo Del Toro's 'Nightmare Alley' Ayaa Lagu Qiimeeyay R
'Sheekooyinka Naxdinta leh ee Mareykanka' waxay ku dhawaaqayaan Xiddig Xiddig ah Talent Onscreen